MDC Alliance Yotyirwa reMangwana Rayo Zvichitevera Kushaya kwaVaTsvangirai
VaTsvangirai ndivo vakanga vadomwa kuti vamirire MDC Alliance musarudzo
Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti kushaya kwevaive mutungamiri weMDC, VaMorgan Tsvangirai, hakufanirwe kubva kwavewo kuparara kwemubatanidzwa wavakanga vavaka, weMDC Alliance, uyo une mapato manomwe anopikisa.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute, Doctor Pedzisai Ruhanya, vanoti mubatanidzwa uyu ndiyo imwe yenhaka dzakasiiwa nemushakabvu, uye vari kukurudzira kuti vachange vachitungamira bato reMDC-T, vaendese mberi muono waVaTsvangirai uyu.
"Chekutanga ndechekuti tine urombo nekurasikirwa naVaTsvangirai. Asi tine tariro yekuti VaTsvangirai pavakabatwa nechirwere che cancer, vane matanho avakatora ari kurambwa nevanhu," Doctor Ruhanya vanodaro.
Vanoti matanho aVaTsvangirai akave ekudana vavakavamba navo musangano weMDC, vanoti Professor Welshman Ncube naVaTendai Biti kuti vabatane zvakare vaite chinhu chimwe chete sezvavakanga vari pakaumbwa musangano uyu muna 1999.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Doctor Takavafira Zhou, vanove zvakare mutungamiri weProgressive Teachers' Union of Zimbabwe, PTUZ, vanotiwo nyaya yekuumba mubatanidzwa weMDC Alliance inobva kumuono waVaTsvangirai yekukurudzira mapato anopikisa kuti abatane, kana kuti apinde muimba hombe yavaiti 'big tent'.
"Semaonero angu, ndanga ndichifunga kuti vanotungamira MFV dai vatadza kuonera pedo sehozhwa, vaona mberimberi kwatinoenda uko kuti alliance yakanaka," Vanodaro Doctor Zhou.
Asi vane ruzivo nezviri kuitika mumubatanidzwa uyu vanoti mitswe yatotanga kuonekwa, sezvo vamwe vevatungamiri muMDC-T vari kuramba kubatana nemamwe mapato, vachingoda kubatana nemapato akabuda muMDC chete, kwete kutora vamwe vose vasineyi nekuumbwa kwebato iri.
Vatungamiri vemapato ari mumubatanidzwa uyu vanonzi vari kutarisira kusangana kuti vazeye remangwana remubatanidzwa uyu, pamwe nekusarudza mumwe mutungungamiri achaumirira musarudzo.
Hurukuro naDoctor Pedzisai Ruhanya pamwe naDoctor Takavafira Zhou